Tsy niova ny tarehimarika: ahena ho 300 ny reny maty eo am-piterahana | NewsMada
Tsy niova ny tarehimarika: ahena ho 300 ny reny maty eo am-piterahana
“Tao anatin’ny dimy taona farany, tsy niova loatra ny taham-pahafatesan’ny reny sy ny zaza ka mila ezaka izany amin’ny alalan’ny fanatanterahana ny hetsika atao indroa isan-taona, Herinandron’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza”, hoy ny minisitry ny Fahasalamana, Rantomalala Yoël Harinirina, omaly teny Ambohidahy. Ahena ho 300 amin’ny reny miteraka 100 000 ny maty eo am-piterahana, na mandritra ny fitondrana vohoka. Zaza 17 amin’ny 1000 teraka sisa no tokony hamoy ny ainy ary zaza latsaky ny 5 taona mahatratra 31 amin’ny 1000. Tanjona napetraky ny minisiteran’ny Fahasalamana ireo hotratrarina ao anatin’ny tanjona lovain-jafy (ODD). Misy tolotra ho an’ny zaza lasaky ny 5 taona sy ny reny mitondra vohoka, manomboka amin’ny alatsinainy izao ary haharitra hadimiana manerana ny Nosy ao anatin’ny andiany faha-25. Hizarana vitamine A ny zaza enim-bolana ka hatramin’ny 59 volana 4 tapitrisa latsaka amin’ny fari-piadidian’ny fahasalamana 112. Mahatratra 3 tapitrisa mahery kosa ny zaza herintaona ka hatramin’ny 59 volana hahazo fanafody kankana, omena izany koa ny vehivavy mitondra vohoka ka feno efa-bolana ny kibony. Ao anatin’ny asa fanantenana koa ny fitiliana ny zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka amin’ny toby PNNC Seecaline sy ny tobim-pahasalamana. Mitohy ihany ny fanaovam-baksiny mahazatra ho an’ny zaza vao teraka hatramin’ny herintaona.
Maimaimpoana ny tolotra rehetra
Arahi-maso ny aretina azo sorohina amin’ny alalan’ny vaksiny, toy ny fahalemena tampoka amin’ny ankizy latsaky ny 15 taona, ny aretina kitrotro, na ny aretina tetanosy azon’ny zaza teo am-piterahana. Vehivavy mitondra vohoka 570 000 no tiliana manokana ny tsimokaretina VIH/Sida. « Ankohonana salama antoky ny fampandrosoana » ny lohahevitra amin’ny andiany faha-25 ho tanterahina any Mahajanga amin’ny fanokafana ofisialy.
Maimaimpoana avokoa ny tolotra fahasalamana ho an’ny reny sy ny zaza ka entanina ny isan-tokantrano hanatona eny amin’ny tobim-pahasalamana. Midina ifotony eny amin’ny toerana be olona koa ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny mpanentana.